Governemanta Tohanan’ny Miaramila Thailande Hijanona Eo Amin’ny Fahefana Taorian’ny Nandàvana Ny Drafitra Sata · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2015 14:36 GMT
Vakio amin'ny teny မြန်မာ, Español, English
Sarin'ny efitry ny solombavambahoaka, izay nivorian'ny Filankevitra Nasiônaly Ho an'ny Fanovàna, hifidianana manohitra ilay volavolan-dalàmpanorenana natolotra. Sary avy tamin'i John Vincent, Fizakàmanana @Demotix (1/16/2015)
Nolavin'ireo mpikambana amin'ny Filankevitra Nasiônaly ho an'ny Fanovàna (NRC) ilay volavolan-dalàm-panorenana, izay manokatra ny làlana ho an'ny fitohizan'ny fitondrana miaramila ao amin'ny firenena.
Raha nanao fanonganam-panjakana ny miaramila ny taona lasa iny dia nampanantena ny hametraka fanovàna ara-politika mialoha ny hanaovana ireo fifidianana. Tafiditra amin'ny ampahan'ny zotra tokony lalovana, nanao drafitra lalàmpanorenana io, izay noheverina hamerina ny fitondràna sivily teo amin'ny firenena. Nefa ny 6 Septambra 2015, nifidy ny handà ilay drafitra lalàmpanorenana ny NRC. Ny governemanta tohanan'ny miaramila no nanendry ireo mpikambana ao amin'ny NRC.
Mpikambana amin'ny NRC miaraka maka sarin'ny vondrona talohan'ny fotoana fifidianana ilay drafitra lalàmpanorenana
Ireo Vokatry ny fandàvana ny drafitra sata
Noho ny fifidianana fitsipahana nataon'ny NRC, tokony hanangana Kaomitin'ny Lalàmpanorenana (CDC) vaovao ato anatin'ny 30 andro ny governemanta, ary homena 180 andro ilay kaomity hananganany drafitra lalàmpanorenana iray hafa vaovao indray. Hanaovana fitsapankevitra ilay drafitra vaovao. Raha lany io, alefa any amin'ny mpanjaka ilay lalàna mba ho soniavina. Avy eo, hanao lalàna vaovao ho an'ny lalampanorenana ny CDC, izay hojeren'ny Antenimieram-pirenena Mpanao Lalàna ary ny Fitsaràna Momba ny Lalàmpanorenana. Harahan'ny fifidianana ny Solotena ao amin'ny Antenimiera izany ny Martsa 2017. Midika izany fa mbola hijanona eo amin'ny fitondrana ihany ny governemanta miaramila ato anatin'ny fotoana maherin'ny taona iray sy tapany.
Fintinin'ireo fisehoan-javatra 3 amin'ny kisary torohay eto ambany ny zotra vaovao hanovàna ilay sata
Kisary torohay noforonin'ny tranonkalam-baovao Prachatai
Hetsi-panoherana manohitra ilay Lalàmpanorenana ‘tsy demôkratika’
Fa na talohan'ny nanaovan'ny NRC ny fifidianan'ny aza, marobe ireo mpikatroka mafana fo sy mpianatra eny amin'ny anjerimanontlo nitsikera ilay drafitry ny lalàmpanorenana. Nanipika ireo Vondrona Thailandey Mpiaro ny Zon'olombelona fa tsy ara-dalàna ny fizotry ny fanaovana ilay drafitra lalàmpanorenana. Nohamafisiny fa narafitra tsy nisy fitsapankevi-bahoaka na fanekena avy amin'ireo solotenam-bahoaka akory ilay antontan-taratasy. Tsy misolotena ny vahoaka ireo mpikambana amin'ny CDC satria izy ireo notendren'ny miaramila.
Mikasika ny votoatin'ilay drafitra sata indray, notanisain'ilay vondrona ny andinin-dalàna iray manome fahafahana amin'ny fanendrena mpiasam-panjakana sivily avy amin'ny alalan'ny ‘rafitra ara-moraly’ izay tsy dia voafaritra mazava tsara,. Misy ihany koa ny andalana faha 45, izay manome fiarovana voafetra ho an'ireo mponina tsy mizaka ny zom-pirenena. Nanampy ilay vondrona fa mametra ny fandraisan'ireo olom-pirenena anjara sy ny anjaran'ny solontenan'ny vahoaka ilay drafitra lalàmpanorenana. Ohatra, tsy nitaky ny tokony haha-mpikambana ny praiminisitra ao anatin'ny Parliemanta ilay sata natolotra, satria afaka manondro olon-tsotra ho eo amin'ny toerana ny roa ampahatelon'ny Antenimieran'ny solombavambahoaka.
Nanoso-kevitra ny hananganana Kaomity Stratejika Nasiônaly matanjaka ho an'ny Fanovàna sy ny Fampihavanana (mpiresaka ny olana) ihany koa ilay drafitra lalàmpanorenana, izay homena ny fahefana hitsipaka lalàna nolanian'ny Parliemanta. Ho fanampin'izay, afaka manao fanonganam-panjakana ‘ara-drariny’ io vondrona io, ary maka ny fahefana raha toa ka misy filazàna tany misahotaka na ‘antony manokana’. Araka ny efa novinavinaina, ny olona mpiresaka ny olana dia ahitàna ireo mpitarika miaramila, ny filohan'ny parliemanta, ny praiminisitra ary ireo manampahaizana.
Dr. Likit Teeravekin, manampahaizana sy mpampianatra ny siansa politika ao amin'ny Anjerimanontolo Thammasat, nampitandrina amin'io lazaina ho mpiresaka ny kirizy io:
Omen'ny Andalana faha-280 fahefana goavana ireo Mpiambina, midika izany fa tsy misy dikany tsotra izao akory ny fifidianana.
Worajet Pakeerat, mpampianatra iray hafa avy amin'ny Thammasat, milaza io andinin-dalàna io ho loza mitatao ho an'ny demôkrasia:
Hametraka rafitra mandeha ho azy izay hampaharitra sy hanohana ny fahefan'ireo antokon-draharaha tsy demôkratika manoloana ireo demôkratika io volavolan-dalàmpanorenana io.
Andro vitsy nialoha ny fifidianan'ny NRC, nanao hetsi-panoherana tany Bangkok ireo mpikatroka mafana fo avy amin'ny vondrona manohitra ny junta, antsoina hoe Olon-tsotra Mpanohitra, ary nanainga ny vahoaka ‘Hifidy ny Tsia’ amin'ilay volavolan-dalàm-panorenana raha hisy fitsapankevi-bahoaka hatao.
Takelaka manohitra, manainga ireo vahoaka handà ilay volavolan-dalàm-panorenana 2015. Lehibe taloha tao amin'ny tafika ary Praiminisitra ankehitriny i Prayut, ilay olona hita eo amin'ny takelaka. Sary avy tamin'ny pejy Facebook-n”ny Vondron'ny Mpianatra Demokrasia
Na ho lany na ho lavina ilay volavolan-dalàm-panorenana vaovao amin'ity taona ity, ny zavatra mazava dia hitohy hijanona eo amin'ny fitondrana ihany ny miaramila raha mbola mihantona kosa ireo fanovàna.